ကျန်းမာရေးကို လွန်စွာအထောက်အကူပြုတဲ့ ငှက်ပျောဖူးကို နေ့စဉ်စားသုံးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများ – News
May 15, 2019 May 15, 2019 AuthorLeaveaComment on ကျန်းမာရေးကို လွန်စွာအထောက်အကူပြုတဲ့ ငှက်ပျောဖူးကို နေ့စဉ်စားသုံးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းကဆို မေမေက ငှက်ပျောဖူး မကြာခဏဆိုသလို ချက်ကျွေးလေ့ရှိပါတယ်။ သိပ်ကိုအရသာရှိပြီး စားကောင်းလွန်းလို့ အသားနဲ့တောင်မလဲနိုင်ပါဘူး။ အခုတော့ အိမ်နဲ့ဝေးနေတာကြာပြီမို့ ငှက်ပျောဖူး ကိုစားချင်တိုင်း ဆိုင်တွေမှာ ဈေးကြီးပေးပြီး ၀ယ်စားနေ ရပြီပေါ့ရှင်။ စာဖတ်သူတို့ကော ငှက်ပျောဖူးကို စားဖူးကြလား။ တိုင်းရင်းသားရိုးရာစားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ငှက်ပျောဖူးဟင်းလျာကို ထည့် သွင်းရောင်းချကြပါတယ်။ ငှက်ပျောဖူး ဟာအရသာရှိရုံသာမက ကျန်းမာရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေကို အထူးတလည်မှီဝဲစရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်မတို့နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေဟာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ အခြေခံအရင်းအမြစ်တွေပါပဲ။ ဒီတော့ ငှက်ပျောဖူးစားတာ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိသလဲ..? သွေးအားနည်း ရောဂါကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။အစာအိမ်နာတာကို သက်သာစေပါတယ်။ဆီးချိုရောဂါဝေဒနာရှင်တေနဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေအတွက် အထူး ကောင်းမွန်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအတွက် လစဉ် ဓမ္မတာမှန်စေပါတယ်။ကျောက်ကပ်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကို ကောင်းမွန်စေပါ တယ်။၀မ်းချုပ် တာ ကိုလည်းလျှော့ကျစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သား အိမ် ကိုလည်း ကြံ့ခိုင်စေလို့ သားအိမ်ကျတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သွေးတိုးလည်း ကျစေပါ တယ်။
ကြှနျမငယျငယျတုနျးကဆို မမေကေ ငှကျပြောဖူး မကွာခဏဆိုသလို ခကျြကြှေးလရှေိ့ပါတယျ။ သိပျကိုအရသာရှိပွီး စားကောငျးလှနျးလို့ အသားနဲ့တောငျမလဲနိုငျပါဘူး။ အခုတော့ အိမျနဲ့ဝေးနတောကွာပွီမို့ ငှကျပြောဖူး ကိုစားခငျြတိုငျး ဆိုငျတှမှော ဈေးကွီးပေးပွီး ဝယျစားနေ ရပွီပေါ့ရှငျ။ စာဖတျသူတို့ကော ငှကျပြောဖူးကို စားဖူးကွလား။ တိုငျးရငျးသားရိုးရာစားသောကျဆိုငျတှမှော ငှကျပြောဖူးဟငျးလြာကို ထညျ့ သှငျးရောငျးခကြွပါတယျ။ ငှကျပြောဖူး ဟာအရသာရှိရုံသာမက ကနျြးမာရေးအတှကျ မြားစှာအထောကျအကူပွုပါတယျ။ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျဖို့အတှကျ ဆေးဝါးတှကေို အထူးတလညျမှီဝဲစရာမလိုပါဘူး။ ကြှနျမတို့နစေ့ဉျစားသုံးနတေဲ့ အစားအစာတှဟော ကနျြးမာပြျောရှငျခွငျးရဲ့ အခွခေံအရငျးအမွဈတှပေါပဲ။ ဒီတော့ ငှကျပြောဖူးစားတာ ဘယျလိုအကြိုးကြေးဇူးတှရှေိသလဲ..? သှေးအားနညျး ရောဂါကို ကုသပေးနိုငျပါတယျ။အစာအိမျနာတာကို သကျသာစပေါတယျ။ဆီးခြိုရောဂါဝဒေနာရှငျတနေဲ့ နို့တိုကျမိခငျတှအေတှကျ အထူး ကောငျးမှနျပါတယျ။အမြိုးသမီးတှအေတှကျ လစဉျ ဓမ်မတာမှနျစပေါတယျ။ကြောကျကပျရဲ့လုပျဆောငျမှုကို ကောငျးမှနျစပေါ တယျ။ဝမျးခြုပျ တာ ကိုလညျးလြှော့ကစြပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သား အိမျ ကိုလညျး ကွံ့ခိုငျစလေို့ သားအိမျကတြာ မဖွဈနိုငျပါဘူး။သှေးတိုးလညျး ကစြပေါ တယျ။
ဟာရဲရား နေရာမှာ ယူနိုက်တက်တို့ အစားထိုးသင့်တဲ့ ကစားသမား(၃)ဦး
သွေးကြောများအတွင်း ပိတ်ဆို့နေသောအဆီများကို ရှင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ကြွက်နားရွက်မှို